Fandrindràna - Delta Engineering Belzika
Fihenam-bolo eo amin'ny tendany
Ity singa fitetezana vozona ity izay misy loha 1 manapaka ny hatoka tavoahangy misy sosona maro. Miantoka vozona matevina sy lavorary nefa tsy misy soritra manaloka. Vozona hatrany amin'ny toerana voafaritra. Fehezin'ny servo tanteraka.
Published in fikosoham-bary
Alakamisy 26 martsa 2020 by Cristina Maria Sunea
Kambana twin loha trimming unit
Ity singa fitetezana vozona ity miaraka amina loha 2 dia manapaka ny vozon'akan-tavoahangy misy sosona maro. Miantoka vozona matevina sy lavorary nefa tsy misy soritra manaloka. Vozona hatrany amin'ny toerana voafaritra. Fehezin'ny servo tanteraka.